Home Wararka Toban ka mid ah ciidanka XDS oo lagu dilay weerar ka dhacay...
Toban ka mid ah ciidanka XDS oo lagu dilay weerar ka dhacay duleedka Muqdisho
Ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan milatariga Soomaaliya ayaa lagu dilay weerar isagu jira qaraxyo iyo mid toos ah oo lagula beegsaday wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar, maanta oo Sabti ah, sida ay MOL u xaqiijiyeen saraakiisha CXD .
Qaraxyadda oo ahaa labo – oo kala dhacay waqtiyo kala duwan – islamarkaana lala beegsaday labo gaari Cabdi Bile iyo gaari nooca raaxada ah ayaa midkii koowaad waxaa xigay weerar toos ah, kaasi oo dhabagal ahaa.
Gaariga Cabdi Bilaha oo iska hor-imaadka lagala hortagay kana ka dhashay dagaal fool ka fool ah ayaa lasoo sheegayaa inay socotay is-rasaasaynta dhowr daqiiqadood xili ay udhaxaysay rag hubeysan oo Shabaab ah iyo ciidamada.
Goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay in labada gaari ay waxyeelo kasoo gaartay Qaraxyadda iyadda oo fahfaahinada qaarkood ay tibaaxayaan inay ku gubteen weeraradaasi, wallow aanan la xaqiijin karin.
“Ciidamada waxaa la bartilmaameedsaday iyaga oo maraya duleedka degmada Balcad Khasaaro dhimasho iyo dhaawacba way jiraan,” ayuu yiri sarkaal ka gaabsaday inuu magaciisa baahiyo, oo u waramay MOL.
Ma jiro war qoraal ah oo ay xoogaga Al-Shabaab ee gacan-saarka la leh Ururwaynaha Al-qaacida kasoo saartay weerarkaan jidgalka ah oo ay ku qaaday Kolanyada ka tirsan ciidamada xooga dalka Soomaaliya.
Inta badan gaadiidka ay la socdaan ciidamada xooga iyo masuuliyiinta gobolka iyo maamulka HirShabelle ee adeegsada wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar ayaa la kulma weeraro jidgal ah, kuwaasi oo khasaarooyin geystay.
Previous articleAl Shabab carried out an ambush and killed at least ten soldiers
Next articleSomali Government readies peacekeeping troops for South Sudan mission
Dagaal Culus oo Maanta ka dhacay Isgooyska Baar ayaan (Faah-faahin)